Fanomezan-danja ny vita malagasy : Lanonana fanolorana fiarakodia "Karenjy" ho an'ny Ministeran'ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina | Primature
Anosy, 08 Mey 2018 – Nanome voninahitra ny lanonam-panolorana ireo fiarakodia « Karenjy – Mazana II » izay natolotry ny Fitondram-panjakana ho an’ny Ministeran’ny Indostria sy ny Fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Izao no natao dia ho fampandehanana misimisy kokoa ny asa sahanina eo anivon’ity departemanta ity. Ary nosafidiana ny “Karenjy” satria tafiditra ao anatin’ny politikan’ny Fitondrana ny fanjifana sy fampiroboroboana ny vita Malagasy.
Nandritra ny lahateniny dia nanentana ireo mpandraharaha Malagasy ny Praiminisitra « mba hiditra misimisy kokoa amin’ny orinasa goavana na « industrie lourde ». Marina fa efa betsaka ireo orinasa mamokatra ny vita Malagasy amin’ny sehatra maro isan-karazany, ary ny tena ahafantarana azy ireo dia ny fanodinana ny vokatry ny tany sy ny fanodinana lamba. Saingy ilain’ny Firenena ihany koa ny orinasa goavana satria ahafahana mamorona asa sy mitondra avo ihany koa ny faneva maha Malagasy ».
Notsiahiviny ihany koa fa « tafiditra ao anatin’ny vinan’ny Fitondram-panjakana ny fijerena izay paika entina mampiroborobo ny orinasa tsy miankina, vina izay entina hanindraindrana ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina sy ny vita Malagasy. Ilaina ny mampiroborobo ny vita gasy, ilaina ny manampy ny sehatra tsy miankina amin’ny fampiroboroboana ny toekarena, fa ilaina ihany koa ny mitsinjo lavitra satria ny famokarana sy ny fanjifana ny vita Malagasy ihany koa dia ahafahana mampitombo ny harikarentsika ».
Niarahaba manokana ny Ministeran’ny Indostria ny Lehiben’ny Governemanta noho izao safidin’izy ireo hanjifa ny vita Malagasy izao ary mampirisika ireo Ministera hafa mba hanjifa toy izany koa. « Tsy mena-mitaha amin’ny vita avy any ivelany ireto fiarakodia ireto, tena raitra dia raitra tokoa », hoy hatrany ny Praiminisitra
← Lanonana nanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany teny amin’ny Antenimierampirenena
Conseil du Gouvernement du 08 Mai 2018 →